Na-edebe weebụsaịtị Hacking At Bay Na Acunetix: Atụmatụ Na-edozi Aka Site na Ọkachamara Maka Ndị Site n'Ịntanet
Cybercrime na iji dokwuo anya, hacking nọ na ịrị elu. Ndị na-agba ọsọ na-enwetamara mma na ndị ọzọ ọkaibe na ha na-arịa ọrịa egwuregwu. Akụkọ akụtawo na ha anaghị arụ ọrụ dị ka mmadụ n'otu n'otu ma kama dịkaobodo na-akpachi anya - smallest gps tracker. N'ebe a, ha biputere na ịkekọrịta usoro intrusion ngwa weebụ ọhụrụ iji nye gị ụra abalị.Ndị na-abanye na weebụsaịtị na forums ndị a bụ naanị ndị ole na ole ahọpụtara.
Kwa ụbọchị, ị na-agụ banyere mwakpo ọbịbịa ọhụrụ nke ibe nke ebe nrụọrụ weebụ a ma amaenwe nje malware. Mwakpo ndị a na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ banye na saịtị. Onye ọ bụla nke na-aga na ebe nrụọrụ weebụ hacked nwere nnukwu ihe ize ndụna-enweta PC ha infiltrated.
Gịnị mere mpụ cyber na-eme nke ọma? Ọfọn, azịza ya ziri ezi; ntinye weebụna teknụzụ dị iche iche maka iduzi e-azụmahịa emeela ebe zuru okè maka ndị na-agba ọsọ. Ọ bụ ezie na ngwa ndị a na-ekwe kaahia iji jikọta seamlessly na ndị ahịa na ndị na-ebu ngwá ọrụ, ọtụtụ egwu egwu egwu a na-amaghị na mbụ apụta.
Ihe mere ị ga - eji mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị bụrụ nke ndị omempụ nwere ike ịbụ ọtụtụ. IgorGamanenko, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, na-enye gị elele mmadụ ole na ole ma dezie ụzọ iji chebe onwe gị.
Mbanye anataghị ikike maka mmịpụta nke data ọsọ ọsọ
Ọ bụla azụmahịa na-arụ ọrụ n'ịntanetị ga-enwe ụfọdụ ngwa weebụ sitere naịzụ ahịa, akwụkwọ nbanye, ụdị ntinye akwụkwọ, ọdịnaya dị ike tinyere ngwa ngwa weebụ ndị ọzọ dị na bespoke. A haziri ngwa weebụ aiji nyere ndị ọbịa aka, nyefee na weghachite data nzuzo, nke echekwara na nchekwa data..
Ebe ọ bụ na azụmahịa gị na-arụ 24/7, onye ọ bụla si n'ebe ọ bụla n'ụwa nwere ike sọfụsite na ya. O di nwute, ihe obula nke n'enwetaghi nchedo na-emeghe onu ozo nye ndi na-agba oso. Ọ bụrụ na ha nweta ohere ịnweta nchekwa data gị,mgbe ahụ ị nọ n'oké nsogbu. Ndị ahịa gị 'nkọwa nke onwe na kaadị akwụmụgwọ nwere ike ree ma ọ bụ kpughere ndị ọzọ nke ụwa. Ọtụtụ narịnke ụlọ ọrụ kwụsịrị agha iwu maka ikpughe ma ọ bụ izu ohi nke ozi a dị mwute. Ndị ọzọ nwere ụlọ ahịa na-emechi. Ihe niile furu efundi kwesiri ntukwasi obi.
Hacking iji mejuputa atụmatụ phishing
Echela na ebe nchekwa data gị na-anọghị n'ịntanetị ma nọrọ na nche, ị na-enwe nchebe pụọ na hacking.Enwere ike ịbanye ebe nrụọrụ weebụ gị iji ghọgbuo ndị ọrụ n'ime nleta 'na-adịghị emerụ' njikọ wepụtara site na ibe weebụ gị. Nke a bụ otú ha si eme ya: hawebanye koodu n'ime ngwa weebụ gị ka onye ọrụ ahụ nwee ike ibugharị gaa na saịtị phishing, bụ nke a na-ejizi weghachite akụ hankọwa akaụntụ. Ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla na-achọta ịbụ phishing (ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị bụ onye a na-ata ahụhụ) bụ maka ikpe. Nke dị oke ọnụ.
Hacking iji mebie bandwit
Bandwit nwere ike ịbụ ngwaahịa bara uru. Ihe na onye na-egwu egwu ga-achọ ijieduzi ahia na-akwadoghị dịka ịkekọrịta ọdịnaya. Mgbe ndị ọchịchị gọọmenti etiti na-akụ aka, ọ bụ gị ga-enwe ụfọdụakọwa ka ime.
Dịka o doro anya, enwere ike ịbanye ebe nrụọrụ weebụ gị maka ihe ọ bụla. Kwere ya, ma ọ bụụfọdụ hackers infiltrate gị na ebe nrụọrụ weebụ naanị maka SEO ebumnuche? Queer, nri?
Acunetix ga-echebe gị
Chebe onwe gị site na ndị na-agba ọsọ site na iji Acunetix. SQL mgbagwoju anya na obenchịkọta akụkọ sitere na saịtị dị ka ndị na-ekpughe na ebe nrụọrụ weebụ UN, United States Department of Homeland Security, Yahoo na United KingdomEnwere ike igbochi ọrụ obodo site na iji Acunetix. Gbalịa ya taa. Ị ga-adị mma.